Lixabiso PCB Manufacturing In China
Xa kufikwa kumzi mveliso we-elektroniki ye-PCB, abantu bahlala bejolise ingqalelo yabo kwimarike yaseTshayina. bakhetha ukujonga umenzi we-PCB e-China, Kutheni le nto ithandwa kangaka ziinjineli kwihlabathi liphela ngumbuzo. ...
Uyenza njani into ebonakalayo yesilika?
I-PCB Silkscreen zihlala zisetyenziswa ziinjineli kwimveliso ye-PCB nakwiNdibano, nangona kunjalo, uninzi lwee-PCB ze-PCB zicinga ukuba iligi yesilika ayibalulekanga njengesekethe, ngoko ke ayikhathali malunga nobukhulu belivo kunye nendawo yokuma, Yintoni i-PCB yoyilo lwesilika i ...
Yintoni i-PCB eqinileyo yeFlex kwaye ngoba?
Ngokuphuhliswa kwetekhnoloji ye-elektroniki, iibhodi zesekethe, njengoko umntu ophethe izinto ze-elektroniki engenakwahlulwa kunye nobomi bethu, iimfuno eziphezulu kunye nokwahluka kweemveliso ze-elektroniki kuye kwaba ngamandla okuqhuba kophuhliso lweteknoloji yebhodi yesekethe ...
Yintoni Ukuthintela kwibhodi ye-PCB?
Xa kuziwa kwisiphene, iinjineli ezininzi zineengxaki ezininzi ngayo. Kuba zininzi izinto eziguquguqukayo ezichaphazela ixabiso le-impedance elawulwayo kwibhodi yesekethe eprintiweyo, nangona kunjalo, yintoni impedance kwaye yintoni ekufuneka siyithathele ingqalelo xa ilawulwa yimpedance? ...
Zeziphi iifayile ezifunekayo kwimveliso yePCB yakho kunye nokudibana?
Ukuhlangabezana neemfuno ezingakumbi ezivela kwiinjineli ezahlukeneyo ze-elektroniki, iitoni zesoftware yoyilo kunye nezixhobo ezibonakalayo kubo ukuba bazikhethe kwaye bazisebenzise, ​​ezinye zezasimahla. Nangona kunjalo, xa ufaka iifayile zakho zoyilo kumenzi nakwi-PCB ye-Assembly, unokuxelelwa ukuba ayisebenzi ...